Ny sakafo mahasalama amin'ny maha-mpamatsy angovo ho an'ny ankizy sy ny tanora
Sakafo tsara ho an'ny ankizy sy ny tanora
Impiry moa ianao no mihinana ary firy ny sakafo ara-dalàna?
Azo ekena ilay sipa mamy
Ny fofona mahasalama ho an'ny sakafo ara-dalàna dia mifototra amin'ny fananana voalanjalanja amin'ny biby sy ny zavamaniry. Ny famokarana angovo mahery vaika dia ahitana kôbhydrate betsaka (50-55 isan-jato) toy ny voamaina, legioma, ovy sy voankazo.
Ny ampahany kely amin'ny tavy (farafahakeliny 30 isan-jato) dia avy amin'ny menaka sy ny menaka ary ny ampahany kely amin'ny proteinina biby (vernis-10-15).
Raha misy balim-balala voajanahary tonga eto, dia mijery tsara ilay zaza ary tsy mila fanampiana.
Ahoana no hamantarana ny tsy fahampian-tsakafo?
NAMPIHINANA SAKAFO NY zaza eo amin'ny lafiny iray, toy ny zavamaniry fotsiny tsy misy ronono, hena be loatra, miaraka amin'ny vaovao sy ny mofomamy na vatomamy ankamaroan'ny, dia ny tsy fisian'ny matavy amine, mamantatra sy vitaminina singa afaka manitsy.
Raha ny tsiron-kevitra iray no tena tiany indrindra, ohatra ny salady, mamy, mando, manenika ny fahatsapana voajanahary. Noho izany, zava-dehibe ny mamporisika ny ankizy hihinana farafaharatsiny amin'ny sakafo rehetra.
Ny sakafo ara-pahasalamana sy tsara indrindra dia miantoka ny sakafo 3-5 mandritra ny andro. Farafahakeliny sakafo iray farafahakeliny tokony hampidirina. Eny, tsapan'ny vavony raha tsy misy mihitsy aza ny hanoanana.
Ho an'ny sakafonao dia afaka mankafy ny voankazo sy ny legioma, ny mofo na ny pao ianao. Ho an'ny sakafo mangatsiaka, voankazo masaka, pasta, legioma na salady dia soso-kevitra. Manome safidy kely amin'ny trondro kely sy ny sakafom-bary. Toy ny fisotroana, mbola rano, voankazo ary dite mena dia mora. Tokony hosorohana ny fisotroana sotro, satria misy siramamy misy siramamy efa misy siramamy 10.
Manana karazan-tsakafo maro samihafa toy izany ny milanja. Amin'ny maha-calcioma, phosphorus, proteinina, zinc, iodine sy vitamin B2 sy B1, izay tena manan-danja tokoa amin'ny fotoam-bary. Raha misy rongony ho an'ny alikaola, diniho ny sakafo ara-tsakafo.
Vitamina ho an'ny ankizy
Ny fihinana dia resaka momba ny natiora
Matetika ny olon-dehibe no mandrefy ny sakafon'ny zanany araka ny fihinanana azy ireo. Tokony horaisina àry ny fikarakarana tsy hanomezana anjara ho an'ny ankizy.
Ny vatany matetika no mahazo izay ilainy. Ara-dalàna raha tsy mihinana isan'andro ny ankizy. Miankina amin'ny vanim-potoana, karazana vatana, fikarakarana ara-batana sy ara-batana, tokony hanitsy ny sakafo tsirairay.
Ny zazasary sy ny zaza kamboty dia ho tototry ny hena sy ny hena betsaka, fa mila sakafo maivana, satria ny metabolismy dia afaka mitantana izany tsaratsara kokoa. Ny legioma mafana sy sakafo mafana dia tsara indrindra ampitaina amin'ny vola madinika mandritra ny andro.
Ny fitsipika dia afaka manentana fahafinaretana
Fomban-tsakafo tsotra vitsivitsy dia manan-danja mba hahatsara ny vavoninao. Satria ny fanarian-tsakafo ara-pahasalamana dia manomboka amin'ny moka voalohany. Ho an'ny sakafo dia mila mihoatra ny fotoana rehetra sy ny fialan-tsasatra. Noho izany, ny fohy fohy alohan'ny aorian'ny sakafo dia zava-dehibe. Ny fisintahana tahaka ny radio, ny fahitalavitra, ny famakiana na ny resadresaka dia tokony hialana. Ary toy ny amin'ireo lehibe: "Ny masonao hihinana miaraka aminao."
Azo atao tsara ny manintona ny siramamy mahafinaritra, satria mamy ny ronono na dia ny ronono aza.
Fanosihosena mamy tsy manenina
Tsy ho sarotra ny hampihatra ny fandraràna sigara tanteraka. Na dia ny Pyramidana Sakafo aza dia nanome ny fitsaboana toerana iray eo ambanin'ny lohateny hoe "Extras", vondron'olon-tsakafo.
Tsy voarara ny sweets. Na izany aza, ny Fikambanana momba ny Fikarakarana ny zaza (FKE) dia manoro hevitra fa tsy mila mihoatra ny 10 isan-jaton'ny famafazana angovo isan'andro amin'ny endrika "fanampiny". Ohatra, ho an'ny ankizy 7-9-taona, dia manodidina ny 180 kcal na manodidina ny grama 45 siramamy na gramin'ny 20 grit.
The perfume right | Cosmetics Beauty Wellness
Asa miasa ho an'ny ankizy sy zatovo
Fitaingan'ny ankizy | Sakafo sy fisotroan-dronono ho an'ny ankizy
Sweets ho an'ny ankizy | sakafo
Sakafo ara-pahasalamana ho an'ny ankizy
Protein mofo | sakafo
Sakafo ara-tsakafo | Diet & Diet
Atsipazo amin'ny fahavaratra | Nutrition Drink
Lactose intolerance | Sakafo ara-pahasalamana